Vaovao - Ny tsy fitovizan'ny volon-doha mafy sy malefaka amin'ny lohan-nify
Ny tsy fitovizan'ny volon-doha borosy mafy sy malefaka
Raha ampitahainamiaraka amin'ny borosy nify mafy, ny borosy nify borosy malefaka dia tsy manimba ny nify ary nahazo sitraka tamin'ny mpanjifa maro. Andao hojerentsika akaiky ny mahasamihafa ny borosy nify malefaka sy ny fomba fampiasana borosy nify malefaka.
Inona no maha samy hafa ny borosy nify malefaka sy ny borosy nify
1. Ny mahasamihafa ny borosy nify malefaka sy ny borosy nify
Ny fahasamihafana miharihary indrindra eo amin'ny borosy nify malefaka sy ny borosy borosy mafy dia ny volon'ny volombava. Ny borosy nify boribory mafy dia mety hanimba ny enamel eo ambonin'ny nify. Ho fanampin'izay, ny tsy fitandremana kely ihany koa dia mety hanimba ny siligaoma. Ny ankamaroan'ny olona dia mila mividy borosy nify malefaka ihany. Fa ny fanesorana ny loto amin'ny nify dia mitovy ny vokany na borosy nify mafy na malefaka no ampiasainao. Ny zava-dehibe indrindra rehefa miborosy nify dia ny miborosy nify amin'ny toerana mety.
Ankoatr'izay, na borosy nify malefaka na mafy, sasao tsara ny borosy nify isaky ny ampiasaina, ary ahintsano ny hamandoana araka izay azo atao mba hahatonga azy io ho maina sy hadio.
2. Ahoana ny fampiasana borosy nify malefaka
1. Ny volom-borosy nify dia tokony hapetraka amin'ny zoro 45 degre amin'ny faran'ny nify, apetraka amin'ny diagonaly ary tsindriana moramora amin'ny tendron'ny tendan'ny nify sy ny siligaoma, borososy miolaka manaraka ny nify interdental, ary ahodiho moramora ny volombava.
2. Aza mampiasa hery be loatra rehefa miborosy nify. Borosio hatrany ambony ka hatrany ambany rehefa miborosy nify ambony sy avy any ambany ka hatrany ambony rehefa miborosy nify ambany. Borosio mandroso sy miverina, diovy ny atiny sy ny ivelany.
3. Tsy maintsy miborosy nify ianao ary manasa ny vavanao isa-maraina sy hariva. Raha azo atao dia sasao avy hatrany ny nifinao isaky ny avy misakafo. Zava-dehibe indrindra ny fikosehana ny nifinao alohan'ny hatory. Borosio ny nifinao tsy latsaky ny 3 minitra isaky ny mandeha.
4. Safidio ny borosy nify mety. Ny borosy nify dia tokony borosy nify fahasalamana. Tokony ho malefaka ny volom-bolo, fisaka ny faritra borosy, kely ny loha borosy, ary boribory boribory ny volony. Ity karazana borosy nify ity dia afaka mamono ny takelaka nify nefa tsy manimba nify sy siligaoma.
5. Isaky ny borosy tsirairay dia sasao ny borosy nify, atsofohy ao anaty kaopy ilay lohan-damba, ary apetraho amin'ny toerana misy rivotra sy maina izy io. Borosy nify vaovao no tokony hosoloina isaky ny 1 ka hatramin'ny 3 volana. Raha miparitaka sy miondrika ireo volombava dia tokony hosoloina ara-potoana izy ireo.